ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: အစိုးရရဲ့ ယုတ်မာချက် ဗြောင်ကျကျ ဖြစ်လာပြီ
အစိုးရရဲ့ ယုတ်မာချက် ဗြောင်ကျကျ ဖြစ်လာပြီ
Ko Nyo's Facebook Status
ဦးသိန်းစိန်အစိုးရက မိုးသီးနဲ့ မိုးဟိန်း တို့ကို နာမည်ပျက်စာရင်းထည့်ထားတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကို ပြည်တော်ပြန်ဝင်ခွင့် မပေးတော့ဘူး။ ပြည်တွင်းလေကြောင်းတွေအားလုံးကို နာမည်ပျက်စာရင်း ထုတ်ပြန်ထားသူတွေကို ခရီးသည်အဖြင့် တင်ဆောင်ခွင့်မပြုဖို့ စာပို့ထားတယ်။
တချိန်က စစ်အစိုးရကို ဆန့်ကျင်ခဲ့သူမှန်သမျှအပေါ် သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရက သေချာစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းပြုပြီး အခွင့်အရေးရတာနဲ့ (မိမိဘောင်ထဲ ရောက်လာတာနဲ့) နယ်နှင်မောင်းထုတ်မှုတွေ လုပ်နေတယ်။ သံဃာတော်တွေကိုလည်း ချမ်းသာမပေးတော့ဘူး။ မနေ့ညက ပီနံဆရာတော့ ဂျပန်ကို ကြွနေတဲ့အချိန် ကျောင်းကို အတင်းအဓမ္မ ၀င်စီးနင်းပြီး ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကို ထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်။ ဒီအတိုင်းဆို ပီနန်ဆရာတော်ကြီးကို ပြည်ဝင်ခွင့်မပေးတော့ဘူးလို့ ယူဆဖွယ်ရှိတယ်။ နယ်နှင်လိုက်တာဖြစ်တယ်။
အပြင်ကလူတွေ အထဲသွားပြီး ပါးစပ်ပိတ်နေရင် ဗီဇာရင်တိုးပေးနေတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ ၀င်ပြီး နေထိုင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ အပြင်က နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေ အများစုဟာ မတရားလည်း အောင့်အီးသည်းညည်းခံနေကြတယ်။ စစ်အာဏာရှင်ခေတ်တုန်းကပုံစံလို ဖြစ်နေတယ်။ ပေးတာယူ၊ ထားရာနေ၊ နယ်အနှင်မခံချင် ဘာမှမပြောနဲ့ ဆိုတာမျိုး ဖြစ်နေတယ်။ တချိန်က ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်၊ သူပုန်ခေါင်းဆောင်တွေ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ မီဒီယာသမားတွေကိုပါ လေ့လာ၊ မှတ်တမ်းကြည့်၊ စာရင်းကောက်ပြီး ပြည်တွင်ူးမှာ ဆက်ထားသင့် မထားသင့် ချိန်ဆနေတယ်။ အထဲရောက်နေတဲ့ အပြင်ကလူတွေလည်း အထုပ်ပြင်ထားကြပြီ။
ဘယ်အချိန် ငါ့ကို မောင်းထုတ်မလဲ စိုးတထိတ်ထိတ် ဖြစ်နေတယ်။ သမ္မတသိန်းစိန်ကလည်း ရဲရဲတောက် တပ်ထွက်မိန့်ခွန်းစတိုင်တွေ ပြောရဲလာပြီ။ သူလည်း ရှေ့ဆက် တိုးလို့မရတော့ဘူးလေ။ သူခိုးဓားပြတွေဆိုတာ ဘူးပေါ်သလို ပေါ်နေပြီကိုး။ ပြည်ပနိုင်ငံတွေ အဖွဲ့တွေကလည်း အစိုးရကို ထပ်ပြီး အကူညီပေးဖို့ ချိန်ဆနေတယ်။ သမ္မတလူကြမ်းအဖွဲ့ကလည်း ရသမျှ အထောက်အပံ့အကူအညီနဲ့ တင်းခံနေဦးမယ့်သဘောရှိတယ်။ အရင်က ဒီလောက် အသိအမှတ်ပြုမှုနဲ့ အထောက်အပံ့မှ မရခဲ့တာ ..။ သူတို့အတွက် ဒီလောက်ရတာ နည်းနည်းနောနော အကျိုးအမြတ်မဟုတ်။ တလျှောက်လုံး သူခိုးဓားပြဘ၀နဲ့ နာမည်ပျက်လာသမျှ ဒီလောက်အခွင့်အရေးရတာ ဘယ်ခေတ်နဲ့မှ မတူတဲ့ ဆုထူးလာဘ်ထူးလို့ ဂုဏ်ယူနေမှာပေါ့ ...။
သေချာတာတခုကတော့ စစ်ဘီလူးအစွယ်တွေ ပြူးထွက်လာပြီ။ ဟိန်းဟောက်ခြိမ်းခြောက်နေပြီ။ သေခါနီး နောက်ဆုံးအားတွေ ဖျစ်ညှစ်ထုတ်လာတာဖြစ်တယ်။ လူထုအားကို သိပ်လန့်သွားပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့လက ဒေါ်စုနဲ့၊ ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ သမ္မတကို အားစမ်းလိုက်တာ အတော် ထိတ်ထိတ်ပျာပျာ ဖြစ်သွားတယ်။ ဒါကြောင့် ဘီလူးရုပ် ပြန်ပြလာတာပါ။ မြန်မာပြည်သူတွေက ဒီထက်ပိုပြီး မထူးဘူး၊ နာပြီးရင်း နာနေတာပဲလေ။ သမ္မတသိန်းစိန် အစိုးရသက်တမ်း ၃ နှစ်ကျော်မှာ ဘာတိုးတက်လာလို့လဲ။ အစိုးရတဖွဲ့လုံး ညာသံပေးပြီး တပ်မတော်နဲ့ လွှတ်တော် လူစုခွဲကန် ညာသံပေး ညှပ်တိုက်နေတာပဲလေ။
ဒါကြောင့် ဒီတချီတော့ အစိုးရပြိုတော့မယ်။ နောက်ထပ် လူပြောင်းကစားမယ့် အကွက်ထွင်လိမ့်မယ်။ လှည့်စားလိမ့်မယ်။ ပြည်သူကို ချွေးသိပ်လိမ့်မယ်။ ပြီးရင် ဆန်ရင်းနာနာဖွတ်လိမ့်မယ်။ ပြည်သူတွေ ပေဘ၀ ရောက်ပြီး အထုအထောင်းခံနေရတာ ကြာပြီ။ တူဘ၀ကို ပြန်ပြောင်း နေရာယူရတော့မယ်။ မလျှော့ဇွဲနဲ့ ပြန်လှန်ရမယ့်ကာလ ရောက်လာပြီ။ အတိအကျ အောင်ပွဲခံရမယ့်အချိန် ရောက်လာပြီ။. ငြိမ်မခံဘို့ဘဲလိုတော့တယ်။ ဒီတကြိမ် မြန်မာ့အရေးဟာ တကမ္ဘာလုံး မျက်စေ့အောက်ရောက်နေပြီမို့ ပြည်သူတွေအတွက် အလေးသာလာမှာပါ ...။ ။
လက်နက်အားကိုးနဲ. ထင်ရာစိုင်း ပြီး နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ကို